Shoutcart: Indlela Elula Yokuthenga Ukumemeza Kwabathonya Bezokuxhumana | Martech Zone
Iziteshi zedijithali ziyaqhubeka nokukhula ngesivinini esikhulu, okuyinselelo kubakhangisi yonke indawo njengoba benquma ukuthi yini abangayiphromotha nokuthi bayikhangise kuphi imikhiqizo namasevisi abo ku-inthanethi. Njengoba ubheke ukufinyelela izethameli ezintsha, kuneziteshi zedijithali ezivamile ezifana nokushicilelwa komkhakha nemiphumela yosesho… kodwa zikhona futhi abathonya.
Ukukhangisa kwe-Influencer kuyaqhubeka nokukhula ekudumeni ngoba abagqugquzeli bakhule ngokucophelela futhi bakhetha izethameli zabo nabalandeli ngokuhamba kwesikhathi. Izithameli zabo sezikhule zibathemba kanye nemikhiqizo abayiletha etafuleni. Nokho, akukho ngaphandle kokubi.
Abaningi abathonya bangabantu abanabalandeli abaningi… kodwa abanalo igunya ngobuningi babo. Bengizifaka kuleyo kholamu. Nakuba nginabalandeli abaningi, abalandeli bami bayaqaphela ukuthi ngibabonisa izinkundla ukuze benze ucwaningo olwengeziwe futhi babone ukuthi iyabafanela yini. Ngenxa yalokho, ngingathola ukuchofoza okuningi kumxhasi noma isixhumanisi esihlobene… kodwa hhayi ukuthengwa. Kulungile ngalokho, futhi ngivame ukukhuluma nabakhangisi abaza kimi ukuze bathole imikhankaso yokumaketha yabanamandla.
Kunezinhlobo eziningi ukumaketha kwamathonya izinkundla ezikhona, eziningi zazo eziyinkimbinkimbi ngezicelo zomkhankaso, ubufakazi bezibalo, izixhumanisi zokulandela umkhondo, njll. Njengomgqugquzeli, ngivame ukweqa lezi zicelo ngenxa yokuthi isikhathi esisithathayo ukufaka isicelo nokusebenza nenkampani asiyifanele imali engenayo abayitholayo. banikela ngomkhankaso oyimpumelelo. Shoutcart kuphambene impela… vele uthole abagqugquzeli, ukhokhele ukumemeza kwakho, bese ubheka imiphumela. I-Shoutcart inikeza izici ezilandelayo nezinzuzo:
Imikhankaso Eyelekayo - I-Shoutcart inikeza amandla oku-oda ukumemeza okuvela kubagqugquzeli abaningi ngesikhathi esisodwa. Thenga ukumemeza okuphansi njengamadola ambalwa, nangaphezulu kuka-$10k ngesikhathi.
Izibalo zabantu zabalandeli - Hlunga abalandeli ngolimi, izwe, ubudala, ubulili kanye nobulili okukuvumela ukuthi ukhethe abathonya ngokulandelayo okufana nezithameli zakho.
Ukulandelela kanye namamethrikhi – Ukulandelela okuthunyelwe kanye nezibalo kuyatholakala kuyo yonke imikhankaso, thola ukuthi yimuphi umgqugquzeli oletha i-ROI eningi, futhi ungamoshi ibhajethi yakho.
I-Bigger Bang for Buck yakho - Ukumaketha kwe-Influencer akubizi futhi kuyiqiniso kakhulu kunezindawo zendabuko! Ungaqala ku-Soutcart nge-$10 kuphela!
Ukucwaningwa Kwamabhuku Kwansuku zonke - I-Shoutcart ihlola abagqugquzeli bethu nsuku zonke ukuze ube nolwazi olusobala lokuthi usebenza nobani ukuze wandise imiphumela!
I-Shoutcart ifaka abathonya abavela ku-Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, naku-Facebook.
Ungawethula Kanjani Umkhankaso Wakho Wokuqala Wenqola Yokumemeza
Asikho isidingo sezingcingo zokuthengisa nezinkontileka, i-Shoutcart ngokuyisisekelo iyisitolo esiku-inthanethi sokuthenga ama-influencer shoutouts. Nansi indlela yokuqalisa:
Thola Abathonya Bakho - Phequlula izinkulungwane zabagqugquzeli ku-Soutcart, bese ukhetha abambalwa abafanelana kangcono ne-niche yakho noma okunikezwayo. Ungakhetha ngesigaba, usayizi wezithameli, izibalo zabantu babalandeli noma umane useshe ngegama elingukhiye.
Engeza ekalishini - Ngemuva kokukhetha abathonya abahamba phambili, bangeze enqoleni yakho bese uqala ukwenza i-oda!
Dala i-oda lakho - Gcwalisa ifomu elilula bese ulayisha isithombe/ividiyo ukuze abagqugquzeli bayithumele. Faka igama lakho lomsebenzisi noma isixhumanisi kumagama-ncazo we-oda, ukuze ababukeli bazi ukuthi bangafinyelela kanjani okunikezwayo kwakho.
Hlela futhi Ukhokhe - Khetha isikhathi osithandayo sokumemeza, bese ukhokhela i-oda. Vumela kufika emahoreni angama-72 ukuze abagqugquzeli bashicilele i-oda lakho kodwa ungakhathazeki, abagqugquzeli ngeke bathumele ngaphambi kwesikhathi osithandayo.
Thola Ukuchayeka - Ngemuva kokuthi i- shoutout yakho isikhokhelwe futhi ihleliwe, uzothola okuthunyelwe kubagqugquzeli obakhethile! Kulula kanjalo!
Phequlula Abathonya ku-Soutcart
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Shoutcart kanye nethonya kunethiwekhi yabo.
Tags: thenga imikhankaso yokuthengisa ye-influencerukuthenga shoutoutsthenga izingosi zokuxhumanaFacebookfacebook influencersimikhankaso ye-influencer marketingukumaketha kwamathonyaipulatifomu yokuthengisa enomthelelainstagramama-instagram influencersinqola yokumemezaama-tiktok influencersTwitteryoutubeabagqugquzeli be-youtube